Iindaba - LANDELA INDLELA EBLULE
Umzi mveliso wempahla eyolukiweyo onoxanduva uqinisekisa ukhuseleko kunye nendawo ecocekileyo, ngaloo ndlela kuqinisekiswa imodeli yeshishini yexesha elide kuzo zonke iinkampani ezichaphazelekayo. Itekhnoloji yakutshanje kunye nezona ndlela zisetyenziswayo zibangela isibonelelo sokhuphiswano ngelixa kuncitshiswa iziphumo kwimo engqongileyo nakubantu. Yile nto siyayiqondayo phantsi kwendlela eluhlaza okwesibhakabhaka. Sisonke sitshintsha impembelelo yokusingqongileyo kwindwangu ukuba ibe ngcono.
INYATHELO NGENYATHELO NGOKUJONGANA NOKUZINZA
Ukulawula izinto zeekhemikhali ukusukela ekuqaleni kwenkqubo yokwenziwa kweemveliso zamalaphu ukuya phambili - umbono apho iBLUESIGN izibophelele khona. Ukufakwa koLawulo loMsinga yindlela okufezekiswa ngayo oku. Kungenxa yoko le nto amahlakani kushishino lweekhemikhali evavanywa ngokungqongqo kwindawo ukuze kuhlolwe ukusebenza kweNkqubo yoLawulo lweMveliso. Oku kuvumela ukujonga okucacileyo kwiimveliso zamachiza ezenziweyo kunye nomngcipheko wazo. Idatha echanekileyo kunye nophuhliso lweekhemikhali ezintsha ezinobungozi obuphantsi zizinto eziphambili kulawulo lomngcipheko kunye nokushiya okuzinzileyo kwizinto ezinobungozi. Ulawulo lokwenyani lweeKhemikhali luququzelela ukukhutshwa kobuxhakaxhaka bomxokelelwano wonikezelo lonke, othi wona ubonelele ngomsebenzi okhuselekileyo nozinzileyo kunye neemeko zokuphila.
Izinto zelaphu kunye nezinto ezenziwayo zenziwe ngokukodwa ziikhemikhali ezihloliweyo kwindawo ekhuselekileyo necocekileyo yemveliso ngaphandle kokubeka emngciphekweni umgangatho, ukusebenza okanye uyilo - IBLUESIGN iyakuqinisekisa oku ngovavanyo lwenkampani esizeni kunye nokuphunyezwa kwesicwangciso esibanzi solawulo lomngcipheko kuzo zonke iintlobo zabavelisi. Ukongeza kulawulo lwamachiza asemgangathweni kunye nobungakanani, umxholo ukhuthaza ukulungiswa kophuculo lwezixhobo ukuze kuncitshiswe iimpembelelo ebantwini nakwimeko yendalo iphela. Ukuthotyelwa komgangatho wentlalo yinto ephambili esisiseko kuthi. Abasebenzi abonelisekileyo kwikhonkco lomthengisi kunye nabathengi abaqinisekileyo sisiphumo.
Ukulandeleka kwemveliso yendwangu kufuna idatha eqinisekisiweyo kunye nolwazi olufanelekileyo. Ngapha koko, ukulandelelwa kufuna ukuba kukhawuleziswe kwaye kungabinangxaki ukuze kuthathwe izigqibo zeshishini ezifanelekileyo. Isisombululo seComputer Solution sibonelela ngokulandela umkhondo weemveliso, isilumkiso somngcipheko kwi-Intanethi ukuba kukho utshintsho, kunye neengcebiso zokunciphisa umngcipheko. Umnxibelelanisi womnxibelelanisi womnatha onxibelelanisa amaqabane afanelekileyo kunye. Ke, iimveliso zenziwa ngokusebenza okuphezulu kunye nesibonelelo esikhulu kumthengi nakwimo engqongileyo. Oku kulandeleka ngokuthe ngqo.
Ihlabathi liyayinxiba: Iimveliso ezilukiweyo ezilandela indlela eluhlaza kwaye zinokulandeleka okucacileyo nokuqhubekayo. Umgangatho webhrendi ke ngoko umele umthwalo osingqongileyo kunye nozinzo olukhulu. Unxibelelwano oluvulekileyo ngokusebenzisa ulwazi oluqinisekisiweyo nolusekwe kumntu wesithathu lubalisa ibali elitsha lemveliso liqinisekisa ukuthembeka, umfanekiso ozinzileyo ngelixa usakha ukuthembana. Sibonisa iinzame ezinkulu zeshishini kwaye sikhokela umboleki ngendlela eluhlaza.